Akụkọ Bible: Nwoke Nke Kachasị Ike - Ebe Ndịàmà Jehova Na-edebe Ihe n’Ịntanet
Ị̀ MA aha nwoke kachasị ike nke dịtụworo ndụ? Ọ bụ onyeikpe a na-akpọ Samsịn. Ọ bụ Jehova nyere Samsịn ike ya. Ọbụna tupu a mụọ Samsịn, Jehova gwara nne ya, sị: ‘N’oge na-adịghị anya, ị ga-amụ nwa nwoke. Ọ ga-ebute ụzọ n’ịzọpụta Izrel n’aka ndị Filistia.’
Ndị Filistia bụ ndị ọjọọ bi n’ala Kenan. Ha nwere ọtụtụ ndị ikom na-ebu agha, ha na-emekpakwa ụmụ Izrel ahụ́. Otu oge, mgbe Samsịn na-eje ebe ndị Filistia bi, otu nnukwu ọdụm gbọọrọ ụja na-abịa izute ya. Samsịn jiri aka nkịtị dọgbuo ya. O gbukwara ọtụtụ puku ndị Filistia ọjọọ.
N’ikpeazụ, Samsịn bịara hụ otu nwaanyị a na-akpọ Delaịla n’anya. Ndị ndú ndị Filistia kwere nkwa na onye ọ bụla n’ime ha ga-enye Delaịla otu puku na otu narị ego ọlaọcha ma ọ bụrụ na ọ gwa ha ihe mere Samsịn ji dị ike. Delaịla chọrọ inweta ego ahụ niile. Ọ bụghị ezigbo enyi Samsịn ma ọ bụ nke ndị Chineke. O wee na-ajụ Samsịn ihe mere o ji dị ike.
N’ikpeazụ, Delaịla nwetara Samsin, o wee gwa ya ebe ike ya dị. ‘A kpụtụbeghị ntutu isi m akpụ,’ ka ọ gwara ya. ‘Site n’oge a mụrụ m, Chineke họpụtara m ịbụ ohu ya pụrụ iche nke a na-akpọ Naziraịt. Ọ bụrụ na a kpụọ ntutu isi m, ike m ga-agwụ.’
Oge Delaịla matara nke a, o mere ka Samsịn rahụ ụra n’apata ụkwụ ya. O wee kpọọ otu nwoke ịbịa kpụọ ya isi. Oge Samsịn tetara n’ụra, o nwekwaghị ike. Ndị Filistia bịaziri jide ya. Ha ghụpụrụ anya ya abụọ, mee ya ohu ha.
Otu ụbọchị, ndị Filistia nwere nnọkọ ukwu iji fee chi ha bụ́ Degọn, ha wee kpọpụta Samsịn n’ụlọ mkpọrọ iji ya mee ihe ọchị. Ugbu a, agịrị isi ya etolitetụwo. Samsịn wee sị nwata nwoke nke na-edu ya: ‘Mee ka m metụ ogidi ndị ji ụlọ a aka.’ Samsịn wee rịọ Jehova ka o nye ya ike, o wee jide ogidi abụọ ahụ aka. O tie mkpu, sị: ‘Ka m soro ndị Filistia nke a nwụọ.’ Ndị bịara nnọkọ ahụ dị puku ndị Filistia atọ, ma mgbe Samsịn hulatara onwe ya n’ogidi abụọ ahụ, ụlọ ahụ dara wee kụgbuo ndị ọjọọ niile ahụ.
Ndị Ikpe isi 13 ruo 16.
Gịnị bụ aha nwoke kachasị ike nke dịtụworo ndụ, ònyekwa nyere ya ike ya?
N’otu oge, gịnị ka Samsin mere otu nnukwu ọdụm dị ka ị pụrụ ịhụ na foto a?
Olee ihe nzuzo nke Samsin na-agwa Delaịla na foto a, oleekwa otú nke a si mee ka ndị Filistia jide ya?
Olee otú Samsin si kpata ọnwụ nke ihe dị ka puku atọ n’ime ndị iro ya bụ́ ndị Filistia n’ụbọchị ọ nwụrụ?
Gụọ Ndị Ikpe 13:1-14.
Olee otú Manoa na nwunye ya si setịpụrụ ndị nne na nna ezi ihe nlereanya n’ịzụlite ụmụ ha? (Ikpe 13:8; Ọma 127:3; Efe. 6:4)
Gụọ Ndị Ikpe 14:5-9 na 15:9-16.
Gịnị ka akụkọ banyere ogbugbu Samsin gburu ọdụm, ndọbi ọ dọbiri eriri ọhụrụ ndị e kere ya, na ojiji o ji agba ịnyịnya ibu gbuo otu puku mmadụ, na-egosi banyere otú mmụọ nsọ Jehova si arụ ọrụ?
Olee otú mmụọ nsọ si enyere anyị aka taa? (Ikpe 14:6; 15:14; Zek. 4:6; Ọrụ 4:31)
Gụọ Ndị Ikpe 16:18-31.
Olee ihe mkpakọrịta ọjọọ mere Samsin, gịnịkwa ka anyị pụrụ ịmụta site na nke a? (Ikpe 16:18, 19; 1 Kọr. 15:33)
Kaadị Akụkọ Samsịn
Chọpụta ihe mere Samsịn ji sie ezigbo ike.